यो केहि डरलाग्दो लाग्दछ, जस्तो कि हामी एक स्पामर वा केहि… तर हामी छैनौं। हाम्रो सबै ईमेलहरू लेनदेनको वा प्रकृतिमा आमन्त्रणीय हुन्। वास्तवमा, यी ठेगानाहरूबाट कुनै मार्केटिंग ईमेलहरू आउँदैनन्। मैले राम्रो मित्र र छुटकारा दिने गुरु, ग्रेग क्रिओसलाई बोलाएँ, र उसले मलाई सिधै एओएलको पोस्ट मास्टरहरूको सम्पर्क जानकारीको साथ सेट गर्‍यो। AOL पोस्टमास्टर वेबसाइट। मैले तिनीहरूलाई कल दिएँ र तिनीहरूले मलाई अनब्लक गर्न र श्वेतसूचीमा लिन कस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन् भनेर मलाई बताउँथे।
मैले पत्ता लगाए कि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या यो थियो कि हाम्रो प्रणालीले गलत उल्टो AOL ईमेल खाताहरूमा पठाउँदै थियो जुन हाम्रो उल्टो DNS लुकअप असक्षम गरिएको थियो। रिभर्स DNS एक आईएसपी को लागी तपाइँको डोमेन र कम्पनी जानकारी आईपी ठेगाना बाट आउँदैछ कि लगानि हेर्न को लागी एक साधन हो। यो बन्द गरेर, हामी एक स्पामर जस्तै लाग्यो। पर्याप्त नराम्रा ठेगानाहरूको साथ - एओएलले हामी को हौं भनी हेरौं। जब तिनीहरूले हामी को हौं भनेर पत्ता लगाउन सकेनन्, तिनीहरूले हामीलाई रोक्नुभयो। बोध हुन्छ! म दोष दिन सक्दिन।
हामीले रिभर्स DNS सक्षम गरिसकेपछि, AOL ब्लक खसाल्यो। मैले हाम्रो बिक्री टोलीसँग पनि कुरा गरें र उनीहरूलाई एओएल ईमेल ठेगानाहरूसँग डेमो गर्न रोक्न भनेँ (तिनीहरू टाइप गर्न सजिलो हुन्, हैन त?)। ब्लक ड्रप गरेपछि, तपाईंलाई पोष्टमास्टर साइट मार्फत ह्वाइटलिस्टि forको लागि आवेदन दिन अनुमति छ। मैले कम्तिमा एक दर्जन पटक प्रयोग गरेको छु - तर द्रुत रूपमा तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि तपाईले बनाउनु भन्दा पहिले तपाईको बतखहरु प row्क्तिमा हुनु पर्छ:
तपाईले पेस गर्नुभएको ईमेल ठेगानाहरूलाई निगरानी गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईंले एक पनी पुष्टिकरण लिंक क्लिक गर्नु आवश्यक छ उनीहरूको श्वेतसूची अनुरोधमा काम गर्नु अघि।
एओएलसँग केहि राम्रा पोष्टमास्टर सेवाहरू छन्, तर म यसको सट्टामा हामीले टाउको दुखाइको सामना गर्नुपर्दैन। एक नोट, यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि छैन वा छैन मलाई त्यसले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ वा हामीलाई श्वेतसूचीमा लिने समस्या हो ... होइन हो। मलाई स्प्यामको बारेमा सतर्क कम्पनी देख्न र उनीहरूको ग्राहकहरूको हेरचाह गर्न मन पर्छ।